Banyere Anyị - Leadpacks (Xiamen) Environmental Protection Packing Co., Ltd.
Leadpacks (Xiamen) Environmental Protection mbukota Co., Ltd. e hiwere na 2009 na-agba mbọ ka plastic nkwakọ. Amalitere nyocha na akpa akpa akpa na 2014, wee bido ịmalitepụta akpa akpa na akpa akpa compost na 2016. A na-enwetakwa ọtụtụ asambodo metụtara DIN EN13432 gbaara, akwụkwọ asambodo ISO, akwụkwọ nyocha FDA, SGS, yana patents wdg.
Anyị factory ekpuchi ebe ihe karịrị 6000 square mita na nwere ihe karịrị 50 akpaghị aka igwe, gụnyere film ịfụ igwe, 11-agba elu-ọsọ ebi akwụkwọ igwe, akpa Ndinam igwe, wdg Ofụri Esịt na-aghọta akpaghị aka mmepụta. Nke a abụghị naanị na-ebelata nrụpụta nrụpụta na ọnụahịa, kamakwa ọ na-eme ka nrụpụta arụmọrụ na ogo ngwaahịa dị mma. Mee ka ndị ahịa anyị nweta ọnụahịa kacha mma na ogo kacha mma na ọrụ kacha mma.
"Nchekwa Production, Ogo mbụ" bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị. Anyị nwere ọtụtụ ndị ọrụ aka na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ maka ọtụtụ afọ na ụlọ ọrụ na ọkachamara QC, nwere ntụkwasị obi a pụrụ ịdabere na ya maka ogo dị elu chọrọ, mmeri kachasị elu merie ndị ahịa si mba 58 na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Anyị isi ngwaahịa bụ 100% akpa ere akpa, Compostable akpa, Plastic akpa, Plastic mbukota akpa, Shopping akpa, Nzipu ozi akpa, mkpọchi uwe akpa, Zip mkpọchi akpa, Guzosie pouches, agụụ akpa, Food obere akpa, Coffee akpa, Aluminium foil akpa, ahihia akpa, Gbatịrị film, Ihe nkiri na-apụta wdg.
Iji nwee ike ịchọta mkpa dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche, anyị nwere ndị otu ọkachamara ọkachamara, usoro ntinye nke izizi, yana ọrụ ntanetị 24 awa. Ọrụ nkwakọ ngwaahịa nkwụsịtụ nwere ike izute mkpa nkwakọ ngwaahịa gị ọ bụla.
Ndị ọrụ niile na-anabata gị ka ị gaa ma duzie ụlọ ọrụ anyị.
Cooperated Onye Mmekọ
Anyị na-enwetara a usoro nke yiri asambodo DIN EN13432 gbaara, ISO, FDA, SGS, na nchọpụta Kemịkalụ wdg.